Home Wararka Waa sidee maanta xaalada magaalada Guriceel?
Waa sidee maanta xaalada magaalada Guriceel?
Sida ay sheegayaan wararka naga soo gaaraya degaanka Guriceel, waxaa maanta ay u muuqataa xaaladu muid degan. Magaalada Guriceel oo shalay uu ka dhacay dagaal aad u qaraar oo dhex maray Ciidanka Dowladda Soomaaliya iyo Ciidanka Galmudug oo dhinac ah iyi Xoogagga Ahlu-sunna.
Wararka ayaa intaas ku darya in xaaladda guud ay tahay mid deggan, waxaana sidoo akle lagu soo warramayaa in Ciidanku ay ku kala sugan yihiin goobihii shalay gabbalku ugu dhacay. Dadka degaanka oo aynu saaka la hadalnay ayaa soo sheegaya in aysan jirin wax dagaal ah oo socda, balse waxaa la filan karaa mar waliba in halkaasi uu dagaal ka qarxo mar kale maaddaama labada dhinac ay I hor fadhiyaan.
Dhanka kale, labada ciidan ayaa is horfadhiya iyada oo ay macquul tahay in dagaalka uu maanta markale dib uga qarxo magalaadaas.